ပိုးမွှားများတဲ့နေရာတွေကို နေ့စဉ်ထိတွေ့မိနေတာ သင်သတိထားမိရဲ့လား - Hello Sayarwon
သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဆဲလ်အရေအတွက်ထက် ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားတွေက ပိုများနေတယ်ဆိုတာ သင်သိပါသလား။
အဲဒီပိုးမွှားလေးတွေက လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်၊ လူကနေ အရာဝတ္ထုဆီကို၊ အရာဝတ္ထုကနေ လူဆီကို အဆင့်ဆင့်ပြန့်ပွားရောက်ရှိနိုင်တယ်။ အိမ်မှာရှိတဲ့ အသုံးများဆုံးအရာဝတ္ထုတချို့မှာတောင် ပိုးမွှားအမျိုးအစား ၃၄၀ကျော်ရှိနေနိုင်ပါတယ်။
ဘက်တီးရီးယားတိုင်းက အန္တရာယ်ပေးနိုင်တာမဟုတ်ပေမယ့် အိမ်ထဲမှာတင်ပဲ norovirus ၊E. coli၊ salmonella၊ staphylococcus aureus ဘက်တီးရီးယားတွေအပါအဝင် မကောင်းတဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်။ လူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို ဘက်တီးရီးယားတစ်ကောင် ဝင်ရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ သူကဆက်ပြီး ပွားများလာဖို့ အချိန်မိနစ် ၂၀ ပဲကြာနိုင်ပါတယ်။
ဒီဘက်တီးရီးယားတွေနဲ့ လုံးဝမထိတွေ့အောင်ရှောင်နိုင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သင့်ရဲ့မီးဖိုချောင်ထဲ၊ရေချိုးခန်းနဲ့ ဧည့်ခန်းတွေထဲမှာ မမြင်နိုင်တဲ့ ဘာပိုးမွှားတွေပုန်းခိုနေသလဲသင်သိရဲ့လား။ သင်ကိုယ်တိုင်အတွက်ရော ပိုးမွှားတွေရန်က အပြည့်အဝကာကွယ်ထားနိုင်ပြီလား။
ဒါဆို ပိုးမွှားအများဆုံးရှိနေနိုင်တဲ့ သင့်အိမ်ကပစ္စည်း (၅) မျိုးက ဘာတွေဖြစ်မလဲ။ ပိုးမွှားတွေရန်က ဘယ်လိုကာကွယ်နိုင်မလဲ။
အဝတ်တစ်ခါလျှော်တိုင်း ဆပ်ပြာနဲ့ရေကို သုံးနေတာတောင်မှ အဝတ်လျှော်ကန်ဟာ ပိုးမွှားတွေပေါက်ဖွားရာနေရာတစ်ခုဖြစ်နေနိုင်ပါသေးတယ်။ အထူးသဖြင့် စက်ထဲမှာ အဝတ်စိုတွေ ထားခဲ့တဲ့အခါမျိုးမှာ ပိုးမွှားတွေပေါက်ဖွားဖို့ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖြစ်သွားစေနိုင်ပါတယ်။
တချို့ပိုးမွှားတွေဆိုရင် အဝတ်လျှော်တဲ့အထဲမှာရှိနေနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်cold temperature နဲ့လျှော်နေတာဆိုရင်ပေါ့။
အဝတ်တွေကိုလျှော်ပြီးတာနဲ့မြန်မြန်ရွှေ့ပြောင်းပါ။ အဝတ်စိုတွေကို မထုတ်ဘဲ ဒီတိုင်းထားမိတာ မိနစ် ၃၀ကျော်သွားတယ်ဆိုရင် စက္ကန့်ပိုင်းလောက် ခဏပြန်လျှော်လိုက်ပါ။ ဒီထက်ပိုသေချာချင်ရင်တော့ အသုံးပြုပြီးတဲ့အခါ အဝတ်လျှော်ကန်အတွင်းပိုင်းကို ပိုးသတ်သန့်စင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
(၂) ငရုတ်သီးမှုန့်အပါအဝင် ဟင်းချက်ပစ္စည်းပုလင်းတွေ
ငရုတ်သီးမှုန့်၊ ငံပြာရည်နဲ့ဆော့ပုလင်း စတဲ့ မီးဖိုချောင်သုံး ပုလင်းနဲ့ဘူးလေးတွေကို ဟင်းချက်တိုင်း သို့မဟုတ် ထမင်းပွဲပြင်တိုင်း အသုံးပြုတယ်မဟုတ်လား။ သင့်လက်မှာ ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားတွေပြန့်ပွားနေဖို့ များပါတယ်။
အဲဒီပုလင်းနဲ့ ဘူးတွေကို မကြာခဏထိတွေ့နေပေမယ့်ဆေးကြောသန့်ရှင်းတာ လုပ်ခဲပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အဲဒီပစ္စည်းတွေမှာ ဘက်တီးရီးယားနဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပေါက်ဖွားနေမယ်ဆိုတာပြောစရာတောင်မလိုတော့ပါဘူး။
ဟင်းချက်ပြီးတဲ့အခါ၊ ထမင်းစားပြီးတဲ့အခါ အိုးခွက်ပန်းကန်တွေကိုပဲဆေးကြောသန့်စင်မနေဘဲ အဲဒီပုလင်းတွေကိုလည်း သန့်စင်အောင် ပွတ်သုတ်ပေးပါ။ မသုံးခင်နဲ့ အသုံးပြုပြီးအချိန်တွေမှာ လက်ဆေးတာပိုကောင်းပါတယ်။
(၃) ပန်းကန်ဆေးတဲ့ ရေမြှုပ်
နေအိမ်အတွင်း ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားရှိနေမှုပမာဏကို Global Hygiene Council ရဲ့တိုင်းတာချက်အရ ပျမ်းမျှအားဖြင့် ပန်းကန်ဆေးတဲ့ရေမြှုပ်တစ်ခုမှာ ဘက်တီးရီးယားအကောင်ရေ ၁၉.၆ ဘီလျံရှိနေပါတယ်တဲ့။ ဒီသုတေသနအရဆိုရင် သင့်အိမ်ကရေမြှုပ်မှာရှိနေနိုင်တဲ့ ဘက်တီးရီးယားအရေအတွက်ဟာ အိမ်သာဆေးဘရက်ရှ်ရဲ့လက်ကိုင်မှာထက် ပိုများနေပြီပေါ့။
ပေကျံနေတဲ့အိုးခွက်တွေနဲ့ပန်းကန်ခွက်ယောက်တွေကိုပုံမှန်ဆေးကြောဖို့ မသန့်ရှင်းတဲ့ရေမြှုပ်ကို အသုံးပြုနေတယ်ဆိုရင် မီးဖိုခန်းတစ်ခုလုံးမှာ အန္တရာယ်ပေးမယ့်ပိုးမွှားတွေကို သင်ဖြန့်ဝေနေပြီးဖြစ်လောက်ပါပြီ။
ရေမြှုပ်ကိုရေနွေးနဲ့လောင်းဆေးရုံနဲ့တော့ ပိုးမွှားတွေအကုန်သန့်စင်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့်ရေမြှုပ်ကို တစ်ပတ်တစ်ခု အသစ်လဲသုံးသင့်ပါတယ်။
သင့်လက်မှာကိုင်နေကျ ပိုက်ဆံအိတ်တွေ၊လက်ကိုင်အိတ်လေးတွေကရောဂါပိုးမွှားတွေအများကြီးတွယ်ကပ်နေနိုင်ပါတယ်။ ပိုက်ဆံအိတ်ကိုနေ့တိုင်းကိုင်တွယ်နေရတာကိုး။ အဲဒီအိတ်တွေကို စားပွဲပေါ်ဖြစ်ဖြစ်၊ ကုတင်ပေါ်ဖြစ်ဖြစ်၊ ပေါင်ပေါ်ဖြစ်ဖြစ် နေရာတော်တော်များများမှာ ချထားမိမှာပဲ။နောက်ပြီး ငွေရှင်းတဲ့အခါ အထဲက ပိုက်ဆံတွေကိုလည်း ကိုင်တွယ်နေရသေးတယ်။
အိတ်ထဲမှာ အလှပြင်ပစ္စည်းတွေယူလာတတ်သေးရင် တို့ဖတ်တွေ၊ ဘရက်ရှ်တွေမှာလည်း ပိုးမွှားတွေရှိနေနိုင်ပါတယ်။
ကိုင်နေကျအိတ်ကို လက်သန့်ဆေးရည်လို တစ်ခုခုနဲ့ ပွတ်သုတ်သန့်စင်ပေးပါ။ဖြစ်နိုင်ရင်ငွေစက္ကူတွေကို ကိုင်တွယ်ပြီးတိုင်း လက်ဆေးပါ။ မိတ်ကပ်ပစ္စည်းတွေကို လက်ကိုင်အိတ်ထဲမှာထက် အခန်းအပူချိန်မှာ သန့်ရှင်းခြောက်သွေ့စွာထားရှိသင့်တာဖြစ်ပါတယ်။ မိတ်ကပ်ဘရက်ရှ်တွေကို တစ်ပတ်တစ်ကြိမ် သန့်စင်ပေးပါ။ ပိုးဝင်တာတွေဖြစ်လာခဲ့ရင် မျက်လုံး သို့မဟုတ် အသားအရေအလှအပပစ္စည်းတွေကို ချက်ချင်းအသစ်လဲပါ။
(၅) သွားပွတ်တံ ထည့်တဲ့ခွက်
သင့်ရဲ့သွားနဲ့ခံတွင်းကနေ ကပ်ငြိသွားတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေက သွားပွတ်တံရဲ့ဘရက်ရှ်လေးတွေပေါ်မှာ ရက်သီတင်းပတ်နဲ့ချီပြီး ကျန်ရှိရှင်သန်နိုင်ပါတယ်။ သွားပွတ်တံတွေကိုဘေစင် သို့မဟုတ် အိမ်သာအနီးမှာထားရှိတာဆိုရင် လက်ဆေးတဲ့အခါ၊ အိမ်သာရေဆွဲတဲ့အခါ ပိုးမွှားတွေကပ်ငြိသွားနိုင်ပါတယ်။ ကြမ်းပေါ်ပြုတ်ကျလိုက်မယ်ဆိုရင်ရောဂါပိုးတွေ ပိုတောင်ကပ်တွယ်သွားပါလိမ့်မယ်။လေလုံတဲ့ဘူးနဲ့ ထည့်မိတယ်ဆိုရင် သို့မဟုတ် သွားပွတ်တံအစွပ်နဲ့ထားရင် မမြင်ရတဲ့ မှိုတွေတောင်ရှိနေနိုင်ပါတယ်။
သုံးပြီးတာနဲ့ သွားတိုက်ဆေး သို့မဟုတ် အညစ်အကြေးအကြွင်းအကျန်တွေ မရှိအောင် သွားပွတ်တံကိုသေချာဆေးကြောပါ။လေသလပ်ပြီးခြောက်သွေ့နိုင်အောင်ထောင်လျက်အနေအထားနဲ့ထားရှိပါ။ သွားပွတ်တံကို တခြားသူတွေနဲ့ မျှမသုံးပါနဲ့။ သွားပွတ်တံတွေအကုန်လုံးကို အတူစုမထားဘဲ သီးခြားခွဲထားပါ။ သွားပွတ်တံကို ၃ /၄ လ တစ်ကြိမ် အသစ်လဲပါ။
ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ အရာတိုင်းမှာ ဘက်တီးရီးယားတွေရှိနေနိုင်ပေမယ့် အများစုက အန္တရာယ်မပေးကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ပိုးမွှားတွေကြောင့်ရောဂါဝင်နိုင်ခြေကိုလျှော့နည်းစေဖို့ အမူအကျင့်ကောင်းတွေကိုကျင့်ယူဖို့အရေးကြီးနေပါသေးတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကာကွယ်နိုင်မယ့် အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းတွေကတော့ –
လက်ကို ဆပ်ပြာနဲ့ပုံမှန်ဆေးကြောပါ။ အထူးသဖြင့် အိမ်သာဝင်ပြီးနောက်၊ အသားငါးအစိမ်းတွေကိုင်တွယ်ပြီးနောက်၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေကိုင်တွယ်ပြီးနောက် လက်ဆေးပါ။
အစားအစာမပြင်ဆင်မီနဲ့ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ပြီးနောက် မီးဖိုခန်း သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။
ရေချိုးခန်းနဲ့ သန့်စင်ခန်းကြမ်းပြင်တွေကို မကြာခဏ ပိုးသတ်သန့်စင်ပါ။
Accessed Date Oct 22, 2019.
ရုံးမှာ အမြဲထိတွေ့နေရတဲ့ ရောဂါပိုးမွှားအများဆုံး အရာတွေ
ဘက်တီးရီးယားနဲ့ ပိုးမွှားတွေကို သေစေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ဆပ်ပြာတွေဟာ တကယ်ရောထိရောက်ရဲ့လား